Iziphumo zokwala ukuthandabuza kwindlela yakho kunye ne-Descartes-Rabi uMichael Avraham
Iziphumo zokwala ukuthandabuza kwindlela yakho kunye neDescartes
Iimpendulo > Udidi: Ngokubanzi > Iziphumo zokwala ukuthandabuza kwindlela yakho kunye neDescartes
Ingqiqo Ubuzwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Bendifuna ukubuza ngento endiye ndadibana nayo kwiwebhusayithi yabaGuqukileyo,
Kukho umbuzo owaziwayo kaKant ukuba akukho nxu lumano phakathi kwe-subjective kunye nehlabathi nge-se kwaye kubonakala kulula, ngoko umbuzo uvela malunga nendlela esinokuyithemba ngayo ukucinga kwethu ukuba kukho uxhulumaniso phakathi kwehlabathi kunye nomntu. Emva koko, akunakwenzeka ukunika ubungqina obunjalo ngenxa yokuba siye sahlala sidibana nokuhlehliswa kwemibuzo, kodwa kubonakala ngathi abo bangenamathandabuzo bayayamkela ingcamango yokuba iingcamango ezisisiseko akufanele zizise ubungqina kwaye ngokukodwa ukuba le yinkcazo yabo njengenkcazo. i-axiom.
Ke bendifuna ukubuza, ngaba ingqikelelo echaseneyo yokuba nantoni na engenasizathu iyathandabuzeka, yona ngokwayo iyintelekelelo?
Ukuba kunjalo, ngoko kubonakala ngathi sinohlobo lwesinyanzelo sokuthatha ukuqiniseka malunga neengcinga zethu ezisisiseko, kodwa njengoko kwaziwa u-rabi akakwamkeli oku, kodwa uthatha indawo yokuqiniseka ngengqiqo, kodwa yindlela ehambelana ngayo nebali? Eyona nto inokwenzeka kukuba uyalamkela ibango elithandabuzayo elithi hayi?
Kwakhona, ndikhe ndeza nombuzo malunga noDescartes owathi ngokutsho kwakhe akazange abonakale eyifumana yonke into, kodwa ngenxa yobungqina be-ontological kunye nokuba uThixo ulungile ekuzameni ukusombulula lo mbandela, kodwa wayecinga njani ukuba kulungile yinjongo?
Andiqinisekanga ukuba ndiyawuqonda umbuzo. Nangona kunjalo, ndiza kuphawula kancinci kule nto uyithethileyo:
Kant ayithethi ukuba akukho nxibelelwano phakathi kombono wethu kunye nehlabathi. Kukho ngokuqinisekileyo unxibelelwano, kwaye ngakumbi njani. Ubanga nje ukuba umfanekiso esiwubonayo yinto eyaziyo. Kodwa imele isenzeko ehlabathini ngokwalo. Ngokomzekelo, i-electromagnetic wave ehlabathini iguqulela ekukhanyeni kwingqondo yethu. Ngaba akukho nxibelelwano phakathi kwabo? Ngokucacileyo kukho unxibelelwano. Ukukhanya luphawu olubonakalayo lwamaza ombane.
Kukho umbuzo oye waphakanyiswa ngokubhekiselele kuKant, ukusuka apho ayazi khona ukuba kukho ihlabathi ngokwalo ukuba yonke into efikelelekayo kuthi yi-phenomenon kuphela (i-cognitive phenomena). Ndicinga ukuba esi sisiphumo somgaqo we-causality, ongumgaqo-siseko ophambili. Ukusuka kulo mgaqo kulandela ukuba ukuba kukho into eyaziwayo kufuneka kubekho into ehlabathini ebangela oko.
Bendingawuqondi umbuzo wento engenasizathu. Ngaba uzimisele ukubuza ukuba kukho izinto ngaphandle kwesizathu? Ngokomgaqo kunokwenzeka ewe, kodwa umgaqo we-causality awuthathi. Kwithiyori ye-quantum, umzekelo, ubudlelwane phakathi kwesizathu kunye nesiphumo kwahlukile kwaye akukho ncam ngengqiqo eqhelekileyo.
Uxuba ukuqiniseka nenyaniso. Oko ndicinga ukuba akukho nto iqinisekileyo ayihambelani nengxoxo nangayiphi na indlela.
Ukuthandabuza kuchasene nokuba nengqiqo. Umntu othandabuzayo ucinga ukuba kuphela ukuqiniseka okunika inyaniso, njengoko kuvela kwinto oyithethayo. Kodwa uyaphazama ngaloo nto.
Ingqiqo Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Enkosi kakhulu ngezimvo ezinye zazo ndiye ndaqonda ndizozama ukucacisa iindawo endingaziqondiyo.
2. Ndikhe ndabuza ngale ngongoma nam. Nabani na ongathandabuzekiyo ubonakala evuma ukuba kufuneka kubekho ikhonkco phakathi kwehlabathi kunye nesiganeko (ukuthi amehlo kunye nokukhanya kwi-Doge 1), kodwa ukuba yonke ingqiqo yethu yakhiwe kuphela kwi-priori umgaqo njenge-causality isenokuba. zitolikwe ngenxa yezizathu ezingenakubalwa ukuba iimpembelelo ezivela kwizivamvo zadalwa njani, nkqu iDescartes Sisizathu esiphantsi kwale ngqiqo ibanzi; Kodwa uninzi lwethu alucingi ukuba sisizathu esifanelekileyo. Ukuba kunjalo, umgaqo we-causality yedwa awubonakali ngokwaneleyo, kodwa ufuna enye into, nangona kunjalo kubonakala ngathi isemva.
3. Andizange ndithethe umbuzo malunga neziganeko okanye ezisebenzayo, nangona kunjalo kukho uxhulumaniso, kodwa ngokukodwa malunga neengcamango kunye namabango, umzekelo inkcazo yokucinga kukuba akukho sizathu. Ndicinga ukuba yile nto kuphela apho kukho into ekholelwayo, kuhlobo lokucinga ukuba uThixo uyi-ankile yezizathu emhlabeni. Kodwa ukuba asizithandabuzi izinto ezithelekelelwayo sinokuthi njani ukuba into ethile ayiqinisekanga kodwa ibe nengqiqo? Ngapha koko, nayiphi na ingqikelelo malunga nokuba nengqiqo ithatha ngasemva ukuba inokubuzwa.
3. Kwakhona ngakolunye uhlangothi, umntu othandabuzayo kwindlela yakhe ngokwenene ukulungele ukuthandabuza iingcamango, kodwa ukuba kunjalo, unokuphinda athandabuze ingcamango yokuba iingcamango kufuneka zibuzwe okanye ukuba nantoni na ngaphandle kwesizathu iphosakele. Ukuba kunjalo, ngaba ubonakala egawula isebe lakhe? Hayi?
5/4 bendithetha ngathi 3 Risha.
3. Usebenzisa igama elithi “unobangela” ngendlela endingayiqondiyo. Ngaba uthetha ukungcamla / ukuqiqa?
Ngokwenene akukho siseko sesiseko. Kodwa akuyonyani ukuba andizithandabuzi iingqikelelo. Akukho bango, ukucinga okanye isigqibo, esiqinisekileyo kum.
Umntu oqiqayo Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Ngokwenene ndithetha kwicala lesizathu / incasa.
Okokuqala, malunga no-2 ngaba uyavuma ukuba sinesiseko nje sokuba oko sikubonayo kuyinyani? Kuba akubonakali kwanele ukuba nawuphi na umgaqo ophambili ukuba abe * eyedwa * ibhulorho eya ekwamkelweni kwehlabathi lezinto ezibonakalayo.
Ke ukuba kunjalo, ukwazi njani ukufumana isiseko kodwa ngendlela engaqinisekanga? Le yeyona nto ingacacanga kum.
Kwaye nokuba uthi kunokwenzeka, ngokunxulumene noko kuya kuba kukungaqiniseki? Ngokubhekisele kwesinye isibheno okanye enye intandabuzo? Kunokwenzeka ukuba umboneleli ofanayo uya kuphinda acinge ukuba kukho enye, inkcazo esisiseko, kwaye yena, okanye okokuqala, inkqubo ephantsi yeenkcazo i-axiomatic. Kodwa ke kuthetha nje ukuba uqikelelo ebesicinga ukuba lusisiseko alunjalo, kodwa sisigqibo esivela kwinto esisiseko.
Ngaphandle kokuba uyathandabuza kwaye ubanga ukuba ukucingelwa kunokubuzwa, kodwa ke ukuba kunokwenzeka kungena phi emfanekisweni? Kuba yonke into kuye ilingana ngokulinganayo. (Kwaye ukucinga ukuba yonke into ayinamkhethe ayinamkhethe…)
Kwaye ukuba kunjalo, njengoko ufumana amabango athandabuzayo ke akukho bungqina bokuba kukho into ebonakala isengqiqweni kum, kuba yonke into enokwenzeka ikwinqanaba lokuziphendulela kodwa akukho nxibelelwano phakathi kwayo kunye nehlabathi elinenjongo kwaye ayinakuze ihlanganiswe njengentshayelelo.
Kwaye ukuba awuthandabuzi, awubuzi ngqikelelo ...
Umlamli wokugqibela Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
"I-electromagnetic wave ehlabathini iguqulela ekukhanyeni"
I-wave iguqulela kwiimpawu ze-neuronal. Ukuguqulela kwenye into Ukuguqulela kwenye into… Ngandlela ithile ekugqibeleni kukho ukukhanya.
Akukho nxibelelwano luthe ngqo phakathi kokukhanya kunye namaza. Umxholo awuthanga ngqo kakhulu.
Ndiphulukene nawe ngokupheleleyo. Udibanisa isondo nokungabelani ngesondo ngokuphindaphindiweyo, kwaye awubhekiseli kwinto endiyiphendule ngayo. Sele ndiphendule yonke into.
Umlamli, luqhagamshelo oluthe ngqo. Enye ibangela enye, nokuba yenziwa ngolamlo lwamanyathelo amaninzi. Xa uqhawula indlela phakathi kokukhuhla umdlalo kunye nokuphemba umlilo uya kufumana amanqanaba aphakathi. Ke ngoku? Enye ibangela enye. Ngaba iNafam ukuba kukho inqanaba eliphakathi? Kwaye ukuba sijongene nomba wamandla wamandla akhe?
Uphendula ilahleko Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Ukuba undilahlile, uphendule uthini?...
Into engacacanga kum kukuba kuvunyelwene ngokubanzi ukuba inkcazo yesiseko kukuba akukho sizathu sokuyisekela.
Kodwa ukuba kunjalo, ingqikelelo inokubuzwa njani ngaphandle kokusetyenziswa kwesiseko esithile? Njengoko ubanga ukuba wenza.
Ke kwelinye icala ufumana ukuba uqikelelo lunokubuzwa ngoko unokucinga njani ukuba into inokwenzeka okanye incinci? Emva kwayo yonke loo nto, ungaphinda uphose intandabuzo eyongezelelekileyo kulo mbono wokuba nokwenzeka…? Kwaye ke isigqibo sakho besinengqiqo ukuba ube sulfist. Okanye uya kuthandabuza ukucinga ukuba unokuthandabuza kwaye uya kubambelela.
Kodwa kufuneka kuthiwe kukho ekuqalekeni kokucinga uqikelelo oluthile * oluthile * luya kuba luncinci njengoko lunjalo.
Umzekelo ukucinga ukuba into esicinga ukuba isengqiqweni ngokwenene yinjongo (nokuba akunjalo ayiyonjongo). Kuba kuphela ukusuka apho kunokuthiwa abasebenzi banokwenzeka, njl. Kodwa ukuba uthi zonke iingqikelelo zethu azinakuze zibe nepesenti ethile enentandabuzo ekhoyo kuzo, ngoko ke loo mathandabuzo kufuneka enziwe ngokulandela amabango athandabuzayo angaphandle kuwo, kwaye njengokuba ungumntu othandabuzayo awunakuze ubange ukuba kukho into eyenzekayo. njengoko isengqiqweni...
Ke ndifuna ukuthi nawe uyavuma ukuba kukho into ephambili malunga nendlela yakho kwaye ayizizo zonke izinto ezinokubakho. Okanye amathuba aqinisekileyo.
Ngapha koko, ukuba ndinyanisile, ke into emnandi ukuyibona kukuba ungakhetha ukuba yi-postmodernist kunokuba ube yi-fundamentalist 😉
Kwaye nangona kungekho bungqina bokuthetha ngabo, Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Kwaye nangona kungekho bungqina buthetha ngabo, kukho umkhondo wokuthetha kwintshayelelo kwiincwadi zokholo:
"Ngokolwazi lwam, umntu akanako ukufikelela kwisiqinisekiso kuyo nayiphi na intsimi." Ukuba ufumene indlela yokufikelela kwisiqinisekiso esinjalo mhlawumbi wayengalunganga (ngokuqinisekileyo! 🙂) ”
Oku kuthetha ukuba kukho into ethile kunye nesisiseko esisezantsi sokucinga kwethu ekupheleni kosuku oluthi kukho unxibelelwano phakathi kokuba nengqiqo kunye nelinye ihlabathi kufuneka ligwetywe ngokuthandabuza.
Phendula, ndilahlekelwe nguwe ngoku (ufuna ntoni ngoku) ekubeni ndiphendule yonke into ngaphambili.
indawo yokuhlala? Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Ngaba indlela yakho nayo kufuneka ibe nesiseko esithile (esilinganiselweyo), esiya kuyamkela ngokuqinisekileyo hayi nje ngokubanengqiqo.
Kwaye ndicinga ukuba le nto ibonakala isengqiqweni kuthi eneneni isengqiqweni kwaye kukho unxibelelwano kuloo nto. Kuphela ngale ndlela ndicinga ukuba imibuzo yam inokuthetheleleka ngaphandle kokuwela ekungabazeni ngokupheleleyo kwaye ngakolunye uhlangothi ndingabangi ukuba yonke into iqinisekile.
Kwelinye icala, uqale wabanga ukuba ngokwenene “uyazithandabuza iingcamango ezisisiseko. Akukho bango, ukucinga okanye isigqibo siqinisekile kum. "
Kodwa ukuba ubuthetha ngenene le nto uyibhalileyo, kufuneka ube namandla okubona ukuba yeyiphi na imeko echanekileyo okanye engeyiyo (kuba awungomntu uthandabuzayo….), Kodwa obu buchule bukwaluhlobo lwesiseko kwaye uyasithandabuza kwaye usiphinde kwaye ke kufuneka ube namathandabuzo.
Ndicinga ukuba ezi zinto zilula, kodwa njengoko ndibona ukuba sele uyintanda-bulumko yesibini ukubanga izinto ezifanayo xa nobabini nizibhengeza ukuba ningoo-postmodernists bendifuna ukubona ukuba ndinyanisile na okanye amazwi am ebengekho bukhali na. Kwaye ungayitya ikeyiki kwaye uyishiye iphelele.
Ngenxa yokuba uyavuma ukuba akukho nxibelelwano phakathi kweengcinga kunye nokuzimisela kwabo kwihlabathi ngokutsho kukaKant kwaye wonke umntu kufuneka abuze, kodwa kweminye imiba kukho izigqibo ezifanelekileyo ... Ndiye ndabonisa apha.
Ndiphendula okwesithathu: hayi. Akukho nto iqinisekileyo emehlweni am. Kwaye ndiphinda okweshumi elinesixhenxe ukungaqiniseki ayikokuthandabuza. Ukuthandabuza kuthetha ukuba indawo ethile ayikho ngcono kunechasa. Ukungaqiniseki, kwelinye icala, kuthetha kuphela ukuba andiqinisekanga.
intombazana Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Kwaye kuthekani ngekholamu yejometri ethande ukuba ngu-0. Kwabonakala kukho into esengqiqweni kum. Kusengqiqweni emehlweni am ukuba oko kubonakala kusengqiqweni kum - kusengqiqweni. Kusengqiqweni emehlweni am ukuba oko kubonakala kusengqiqweni kum kusengqiqweni. Siya kunciphisa ukuba nokwenzeka kwi-99.99% yesiqinisekiso kwaye ibango ngalinye liya kuqengqeleka kumda we-0%.
Ndabhala into endiyiqondayo kumbuzo. Kuba ukuba impendulo kukuba "into ibonakala isengqiqweni kum" xa siyibeka kwi-99.99, ke i-99.99 emva kwazo zonke iiakhawunti zehlabathi, kwaye eli libango elithe ngqo kwihlabathi kwaye alililo ibango kum - ke thina misela ubudlelwane obunzima phakathi kwengqiqo kunye nokuqiniseka ngokuqinisekileyo.
Ayiqondwa ngokupheleleyo Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Ummangaliso udalwe njani ukuba akukho siqiniseko kodwa awukhokeli ekuthandabuzekeni?
Kuba yonke imbono yokungaqiniseki kunye nokuhlala unengqondo ucinga ukuba kukho ukhetho lwesibini, kodwa awunakho ukukwazi ukuvavanya oko kusengqiqweni kuba kukodwa kucinga ukuba uya kubuza ukuba kuyaqondakala na...
Lo mmangaliso ungummangaliso ulele kumahluko phakathi kwe-90% ye-blush kunye ne-50% yamathandabuzo (ukuba siyagxininisa kumlinganiselo). Nangona oku kumangalisa ngokwenene kwaye kungaqondakali, kusengenzeka. Ndiqengqeleka ityhubhu izihlandlo ezizigidi ezithandathu. Ndiyabheja isiphumo siya kusasazwa ngokulinganayo kwaye kuya kubakho malunga nesigidi seziphumo kwiwigi nganye. Ndiyathandabuza (ayisiyi-100%) kodwa oku mhlawumbi kuya kwenzeka. Iyamangalisa.
Kwaye ndinamandla okuvavanya ngokunyanisekileyo ixabiso le-intuition ngokunjalo. Oku kujikeleza nje gibberish. Kufana nokubuza ukuba wazi njani ukuba unyanisile, nguwe ogqiba kwelokuba unyanisile. Oku kwahluke njani kwingxoxo eqhelekileyo yokuthandabuza?
Siyigqibile nyani le mibuzo yade yaphalala igazi.
Yintoni uxhulumaniso phakathi koku kunye nengxoxo eqhelekileyo yokuthandabuza. Apha umntu akabuzi ukuba "wazi njani" kodwa uyamkela yonke into ayithethayo kwaye axoxe ngendlela yakhe kuphela. Ukuba uthi uqinisekile ngekhulu leepesenti ukuba into ethile ilungile, kwaye uqinisekile ukuba kwiimeko apho uqinisekile ngekhulu leepesenti ukuba into ethile ilungile, ngoko ke yonke into ilungile kuba umntu onayo nantoni na uya kuhlala emnye. Kodwa ukuba inethuba nje elinokwenzeka, ngoko ke isangqa esiphindaphindayo siyaphela sibe ngu-zero. Ilula kakhulu. Kuyo nayiphi na imeko, kubonakala ngathi kunokwenzeka kum ukuba akukho mntu apha kwisiza ngaphandle kwakho owaziyo ukuphendula le nto. Kwaye nokuba unempendulo ekrelekrele awukwazi ukuyifumana apha kumsonto. Kuyabonakala ukuba i-SAG yayinetyala kwaye yatshintsha phakathi kwempendulo nempendulo.
Ndiyathemba ukuba ndiye ndaqonda ngaphambili Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
kanjalo. Ndiyavuma ukuba ilula kangangokuba ekugqibeleni ukukwazi ukuvavanya intuition ngokwayo yinto ekufuneka uyamkele * ngokuqinisekileyo *, nokuba ngaphakathi kwi-intuition ibandakanyiwe ukuba kungenzeka ukuba ayiqinisekanga, kodwa ayiveli kwi-intuition. umboneleli wangaphandle, kodwa * ngaphakathi * amathandabuzo Inxalenye yenkcazo yalo mba, eyona nto iphambili kukuba kukho into ethile apha ngokuqinisekileyo.
Le ngongoma ibalulekile kuba ndandifuna ukuqiniseka ukuba ezi zinto zazibonakala zilula ngokupheleleyo kum zaziyinyaniso ngokwenene. Kuba njengoko benditshilo ekuqaleni kukho umntu obalulekileyo okwasisithandi sobulumko esiphika ngokupheleleyo le ngongoma kodwa kwelinye icala esithi akathandabuzi into evakala ngathi ayinakwenzeka kwaphela.
Kwaye ke kuyo yonke le ngxoxo apha kuya kubonakala ukuba nawe hamba indlela yakhe, ngoko andizange ndibone ukuba lo mmangaliso unokuveliswa njani kwaye ngokukodwa ekuqondeni kwam kwangaphambili kuwe ukuba le yintandabuzo yangaphandle kwisiseko ngoko kuphakama umbuzo. malunga nokuba kutheni i-10% yamathandabuzo kwaye ingeyiyo i-50% yamathandabuzo endlela. Kodwa ndiyabona ukuba uyavumelana nendlela yam endiyibonisileyo apha.
Ngokwenene, kunokwenzeka ukuba uShabbat ucebise inkcazo echaza ifilosofi efanayo esebenzisa ukuhlanganiswa kokungapheliyo kweenkcazo ukuba nangona yonke inkcazo idinga inkcazo isenobunzima obuncinci, kum ngokwam ivakala idida ngokupheleleyo ukuba kunokwenzeka konke. Kodwa kuphela kwendlela endiyifumene ngayo.
Lo mbuzo ukwabalulekile ekuchaseni kwakho amabango e-fundamentalist kwelinye icala kunye nokuba nokwenzeka kokungaqiniseki kwelinye. Kodwa unokuthi luhlobo oluthile lwe-tatology. Nangona ndicinga ukuba iyawenza ubukhali umahluko phakathi komthengisi wangaphandle (PM) kunye nomthengisi wangaphakathi (indlela yakho yokwenziwa).
Hayi, akuqinisekanga. Nako oku akuqinisekanga.
iyacaphukisa Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Ngaba uyawamkela umahluko phakathi kwebango lakho lokuba iingcamango ezisisiseko ngokwazo zilele kwintelekelelo engaqinisekanga, kunye namathandabuzo angaphandle kwiingcamango ezisisiseko ngokwazo? (Ke mhlawumbi ufumana enye inkqubo yolawulo njengesiseko, okanye ugwetywe njengomntu othandabuzayo).
Kungenjalo andiqondi ngenene ukuba awuthandabuzi njani ukuba uyathandabuza iingcinga nakwipesenti zomntu ngamnye (ukuba nje ingeyonxalenye yengcinga efanayo engaqinisekanga).
Kum kubonakala ngathi kukho umahluko apha endinokuthi ndingawuqondi kuba ukuba akunjalo njengoko benditshilo andiyiqondi ngokupheleleyo indlela obanga ngayo ukuba awuthandabuzi. Mhlawumbi ungayichaza le ngongoma incinci.
Andikwazi ngokwenene ukuqonda ukuba iphi ingxaki apha. Ndithetha izinto ezilula nezicacileyo. Iingqikelelo zam aziqinisekanga emehlweni am. Akunjalo ngenxa yokuba kukho ii-quirks malunga nazo kodwa ngenxa yokuba andiqinisekanga ukuba zichanekile (zikho ezinye iindlela ezinokwenzeka). Andazi ukuba yintoni na intandabuzo yangaphandle. Ndinokuthandabuza okuthile kwiingcinga zam. yiyo leyo.
ngoku ndiyayifumana? Uphendulwe kwiminyaka emi-2 eyadlulayo
Amathandabuzo angaphandle Injongo kukuba amathandabuzo avela kwindawo embi njengoluhlobo lokubhideka lwangaphandle lokucinga kodwa olungelulo lwendalo njengenxalenye yesiseko sokucinga apho umzekelo uthi ichanekile kuphela kwi-90% yamatyala.
Kodwa ngokukhawuleza ukuba ubhale: "Iingcamango zam aziqinisekanga emehlweni am". Kuba andiqinisekanga ukuba zichanekile (zikho ezinye iindlela ezinokwenzeka). Ke kuvakala njengomboneleli ongalunganga kwaphela kwaye ukuba kunjalo ungaqhubeka uyiphosa kwakhona:
Kuba kuthetha ukuba kukho "wena oqaphelayo" kwaye njengangaphandle kubo ujonga iingcamango. Umzekelo unokuqonda oku kumzekeliso wakho malunga namehlo engqondo ukuba ajonge kwimibono ekude.
Kodwa ukuba kunjalo, umele uvume ukuba nguwe owahlulayo (= amehlo?) Bona ngokwabo banokuqiniseka ngokupheleleyo malunga namandla abo okucalula iingcamango ezisisiseko ukuze nokuba akuwufumani umlinganiselo wazo wokuchaneka ngokupheleleyo kusafuneka wenze oku. bamkele ngokuqinisekileyo ukuba banomgangatho othile wokuchaneka Kwaye ezinye iiparamitha ezifana nomgama wengcamango, iminqweno kunye nokunye. Ngoko ke ukuya kwinqanaba elifanayo awuthandabuzi konke konke ukuba nokungachaneki kubo kungokwemvelo kwesi siseko.
Kodwa ukuba uphosa amathandabuzo angalunganga kubo kwakhona:
1. Emva koko awusoze ukwazi ukuphuma kumjikelo wamathandabuzo. 2. Akukho sizathu sokucinga ukuba ubungakanani beenkcukacha-manani bobonelelo yi-10% kuphela enokuthi ingabi yi-50%. Kwaye oku sele kukuthandabuza ngokupheleleyo 3. Kuya kukhokelela kwikhonkco lokukrokra ukuba ekugqibeleni uya kwamkela ukuba ukuchaneka kweenyaniso zakho ezizimeleyo kuthanda ukungena ku-zero kubuninzi bezinto ezinokwenzeka. 4. Unokuphinda ubuze umgaqo wokuphosa amathandabuzo angalunganga.
Iqela lama-Arabhu kurhulumente
Imibuzo evela e-Amartzim
UHenri Bergson Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Tirgits Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Seudat D. David Malka Moshiach Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)
Dvar Torah ukuya Malwa Malka Vula UkuPhakamisa nokuwa kukaBennett kunye neentsingiselo zabo (uKholamu 486)